A place to share and discover presentations and slideshows. Upload your slide decks! Share withalink, tag, comment or embed inablog.
Sing up လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ Photo တွေကို တိုက်ရိုက်တင်လို့မရပါဘူး။ ပထမဆုံး PowerPoint မှာ Slide တွေအနေနဲ့ ထည့်ရပါတယ်။ ပြီးမှ Slideshare မှာ Upload ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ Processing Speed လည်းမြန်ပါတယ်။ Online Presentation တွေအတွက်တော့ တော်တော်အသုံးဝင်မည့် site တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ခြားစိတ်ဝင်စားစရာ Function (Community, Tag. etc...) တွေလည်း ပါပါသေးတယ်။
Put Your Document Online - Scribd's mission is to create the world's largest open library of documents like
.ppt, .pps (Microsoft Powerpoint)
.odt, odp, etc. (Open Office)
.sxw, sxi, etc. (Open Office)
Sing Up လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ Document Format တွေကတော့ အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အများကြီးပါပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Upload လုပ်နိုင်သလို သူများတင်ထားတာတွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိရင်လည်း Format အမျိုးမျိုးနဲ့ Download ဆွဲချနိုင်ပါတယ်။
ByN-181 6:33 pm
အသုံးဝင်တဲ့ information လေး အတွက် ကျေးဇူး ဖိုးချမ်း။
CMS 8:04 am
လာလည်တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး ... ကျေပြီ :D
Yan Aung 5:03 am
အင်ဖောင်မေးချင်းဒွေအတွက် ကျေးဇူး ချာကီး